June 3, 2020 - PARIJATMEDIA
काठमाडौं । कपिलवस्तु नगरपालिका–९ हरनामपुरमा गए राति एक व्यक्तिको ह’त्या भएको छ । हरनामपुरका करिब ४५ वर्षीय श्यामनारायण तिवारीको धा’रिलो ह’तिया’र प्र’हार गरी ह’त्या भएको इलाका प्रहरी कार्यालय पिपराका प्रहरी निरीक्षक आयुषप्रसाद जोशीले जानकारी दिनुभयो । ह’त्या अ’रोपमा प्रहरीले हरनामपुरका २८ वर्षीय रामलौटन चौधरीलाई नि’यन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान शुरु गरेको प्रहरी निरीक्षक जोशीले बताउनुभयो । म’दिरा से’वन गरेको अवस्थामा समान्य वि’वाद हुँदा चौधरीले तिवारीमाथि हति’यार प्र’हार गरेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमान छ । मृ’तक तिवारीको बायाँ आँखा किनारमा चो’ट देखिएको र घाँटीमा का’टिएको अवस्थामा घर नजिकैको बारीमा श’व फेला परेको प्रहरी निरीक्षक जोशीले बताउनुभयो । आज बिहान श’वको मु’चु’ल्का उठाइ परीक्षणका लािग जिल्ला अस्पताल लैजाने तयारी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
“स’न्तान अमेरिकामा, ह’जुरआमा पशुपतिको वृद्धाश्रममा ! मैले संकल्प ग’रेकी छु” (त्यो घर कहिल्यै फर्किन्नँ)”!
काठमाडौं'। ठिक छ वर्षअगाडि इन्द्रकुमारी रिजालले आफ्ना ‘मालिक’ गु’माइन् । त्यसपछि उनको जीवनबाट हाँसो गु’म्यो । जीवन उ’जाड भयो । त्यसपछि उनी पशुपतिनाथको शरणमा आइन् । अब बल्ल उनको ओठमा कहिलेकांही हाँसो देखिन थालेको छ । केही समयअघि पशुपतिनाथ मन्दिरको छेवैमा रहेको वृद्धाश्रम पुग्दा इन्द्र कुमारी विगतमा फर्केर टोलाइरहेकी थिइन् । उनको ब्लडप्रेसर जाँच गर्न आएका केही स्टाफ नर्स नजिकै थिए । तीनैमध्ये एकलाई इन्द्रकुमारीले सोधिन्, ‘नानी तिम्रो बिहे भयो ?’कोठाभर हाँसो गुन्जियो । इन्द्रकुमारीले जवाफ पाइन्, ‘यति छिटो ?’ यो उत्तर इन्द्रकुमारीका लागि अर्को आश्चर्य थियो । उनको त ११ वर्षको उमेरमा विहे भएको थियो । त्यही विवाहले उनको जीवनमा अनेक मोड ल्याएको थियो । चितवनी इन्द्रकुमारीको चितवनमै विवाह भयो । ११ वर्षमा नै उनले घर सम्हाल्न थालिन् । अहिले ९५ वर्ष पुगेकी इन्द्रकुमारीले ती बेलाका कति कुरा
“अ’दुवा चिया र गुर्जो सेवनले ठीक भयो को’रोना (जानकारीको लागी सबैलाई शेयर गरौँ)”
काठमाडौँ । अदुवा र मरिच हालेको कालोचियाँ, गुर्जो तथा नियमित तातोपानी पिएरै को’रोना (कोभिड १९) जितेको कुरा कतिपयलाई पत्यार नलाग्न सक्छ, तर, नेपाल प्रहरीका दुई कर्मचारी भने औंषधिका नाममा यिनै घरेलु उपचारबाट निको भएर फर्किएका छन् '। ‘‘खानपान र व्यायामले नै को’रोना जितियो,’’ अस्पतालबाट बाहिर आएका एक सुरक्षाकर्मीले खुसी हुुँदै सुुनाउनुुभयो '। महानगरीय प्रहरी वृत्त कालिमाटीमा कार्यरत प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) र जवान गरी दुईजनामा ११ दिनअघि को’रोना सं’क्रमण देखिएपछि उपचारका लागि बलम्बुस्थित सशस्त्र प्रहरी वलको कोभिड–१९ अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो '। उहाँहरूले खानपान र व्यायामबाटै कोरोनासँग युुद्ध जित्नुुभएको हो । अस्पताल बसाईको १० दिनपछि उहाँहरू घर फर्किनु भएको छ । हामीले तातोपानी, कालो चिया र शारीरिक ब्यायाम गरेर को’रोनालाई जितेको अनुुभव सुनाउनुभयो' । ‘‘रिपोर्ट पोजेटिभ आएको दिन तनाव भयो, अस
काठमाडौं । लकडाउनको अर्को चरण शुरु भएको छ । सरकारले ३२ जेठसम्म लकडाउनको निर्णय लिइसकेपनि खुकुलो बनाउँदै लैजाने नीति सार्वजनिक गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशवासीका नाममा सम्बोधन गदैै सरकारले अब कोरोना भाइरससँग संघर्ष गर्दै आर्थिक तथा सामाजिक गतिविधि पनि बढाउँदै लैजाने बताइसकेका छन् । उनले केही उद्दोग संचालन र निर्माणहरु भइरहेको उदाहरण दिदै कोरोना रोकथामको उपायसहित निर्माण र उत्पादनको क्षेत्रलाई गति दिइने बताइसकेका छन् । यसलाई अब लकडाउन खुकुलो बनाउँदै लैजाने सरकारको नीति मानिएको छ । लकडाउन क्रमशः खुकुलो बनाउँदै लगिएको आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले बताएका छन् । उनले ऋषि धमलासँग भने, ‘लकाउन क्रमशः खुकुलो भइरहेको छ ।’ सरकारले लकडाउन खुकुलो पारेको कुनै घोषणा नगरेपनि सरकारी निकायमा खुकुलो पार्दै लाने गरी व्यवहारहरु भएका छन् । अत्यावश्यक काममा निस्किएकाहरुलाई सुरक्षाकर्मील
रन्जन कोइराला, काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेललाई अनधिकृत रुपमा विभिन्न भ्यालु एडेड सर्भिस (भास) सञ्चालनमा ल्याएको भन्दै जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणबाट स्वीकृती नलिएरै भासको नाममा ग्राहक ठगेको ठहर गर्दै नियामकले विभिन्न शीर्षकमा कूल साढे १० लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय लिएको हो । एनसेललाई कारबाही गर्ने विषयमा अघिल्लो सोमबार बसेको प्राधिकरण बोर्ड बैठकले निर्णय गरेको भएता पनि हिजो सोमबार बसेको बैठकमा हस्ताक्षर हस्ताक्षर भएको अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिए । ‘सोमबार बसेको बोर्डले एनसेललाई कारबाही गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेको छ,’ उनले भने, ‘एनसेलले प्राधिकरणबाट स्वीकृत नै नलिएर कतिपय भास सञ्चालन गरेको पाइयो । त्यसै आधारमा बोर्डले एनसेललाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो ।’प्राधिकरणको छानविनका क्रममा एनसेलले अनुमतिपत्रको शर्त विप
प्रेम सुनार , ‘सुन्नहोस् है, तपाईंहरुले जति पीडा, वे’दना, रो’दन र चि’त्कार छाड्नुहुन्छ उति नै छिटो न्याय पाउनु हुन्छ ।’शो’काकूल परिवारका सदस्यहरुको मुहारमा क्यामेरा तेस्याउनुअघि युट्युबरहरुले यसरी सम्झाउँछन् । आफन्त गुमाएका शोकाकूल परिवारको स्वतःस्र्फुत आँशु बग्छ । कोही नरोइ एकाग्र भावुक हुन्छन् ।पीडा भएपनि रुदारुदा सकिएको आँशु युट्युबरका लागि भन्ने बित्तिकै कहाँ आउछ र ? मन रोएकै छ तर आँखामा आँशु निकाल्न बाध्य पार्छन् ।रुकुम पश्चिम न’रसंहार का’ण्डका भिडियो खिचेर युट्युबबाट पैसा कमाउन देशैभरका युट्युबर यतिबेला तँ’छाडमछाड गरिरहेका छन् । जसलाई पी’डितहरुको दुःख बे’दनामाथि कुनै मतलब छैन । उनीहरुको मात्र आँशु र संवेदनामाथि भिडियो बनाएर डलर झा’र्न उद्धत छन् ।रुकुम र जाजरकोटको घ’टनास्थललाई अहिले युट्युबरले छपक्कै छोपेका छन् । त्यहाँको दृश्य हेर्दा लाग्छ शो’काकुल परिवारका लागि निम्तिएको यो दशाले
उदयपुर : १२ वर्षीया बालिकालाई बला/त्कार गरी ग-र्भवती बनाएको आ-रोपमा प्रहरीले कटारी नगरपालिका क्षेत्रका एक १७ वर्षीय किशोरलाई प-क्राउ गरेको छ। स्वास्थ्यमा सम-स्या आएपछि गत आइतबार कटारी अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा बालिकाको पेटमा आठ हप्ताको ग-र्भ रहेको खुलेको थियो। पेटमा बच्चा रहेको पुष्टि भएपछि परिवारले सोधपुछ गर्दा बालिकाले घटनाको जानकारी गराएकी थिइन्। अल्ट्रासाउण्ड गरेर हेर्दा ८ हप्ताको गर्भ रहको पुष्टि कटारी अस्पतालका प्रमुख निमित्त मेडिकल सुपरिटेण्डट डाक्टर मुकलेस माधवीले चार पटकसम्म पिसाबबाट परीक्षण गरिने युरिन प्रिभिन्टी टेष्ट (युपिड) गर्दा पोजिटिभ देखिएको बताए । ‘पहिलो पटक गर्दा पोजिटिभ देखियो बालिका कलिलै देखिएकाले एकछिनपछि पुनः युपिड नै ग¥यौँ फेरी पोजिटिभ नै नै देखियो ।’ उनले भने, तेश्रो पटक परीक्षण गर्दासमेत जोजिटिभ नै देखिएपछि प्रविधिलाई पुनः चेकजाँच गरी चौथोपटक
“ए’उटा दलित सँग प्रेम गर्ने सहास भएकी,बालिकाको चरि’त्र ह’त्या गरेर न्याय हुन्छ”? –(रेखा)
काठमाडौं। रुकुममा आफ्नी प्रेमिका लिन भनेर गएका नवराज विक र उनका साथीको गरिएको नि’र्मम ह’त्याको अनुसन्धान यतिबेला चलिरहेको छ। दलित भएर ठकुरी युवती संग प्रेम गरेकै कारण ह’त्या भएको बताईएको केसको यतिबेला अनुसन्धान भैरहेको छ। बाँकी नतिजा अनुसन्धान पछी थाह होला। तर यतिबेला सामाजिक संजालमा घट’नामा जोडिएकी सुष्मा मल्ललाई लिएर अनेक टिकाटिप्पणी भैरहेका छन्। उनको चरित्र ह’त्या गर्ने खालका कमेन्टहरु समेत आईरहेका छन्। अनेकन टिप्पणी आइरहेका बेलामा अभिनेत्री रेखा थापाले कसैको पनि चरि’त्र ह’त्या गर्ने आधिकार कसैलाई नभएको भन्दै आ’क्रो’श व्यक्त गरेकी छिन्। उनले आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजमा घटनाका दो’षीलाई तुरुन्त कार’वाहीको माग गर्दै बालिकाको चरि’त्र ह’त्या नगर्न लेखेकी छिन्। यस्तो छ रेखाको स्टाटस: रुकुम घट’नाका दो’सी माथि कर्वा’ही र पी’डि’तलाई अबिलम्म्ब न्याय दियियोस । यस घ’टन
शुस्मा मल्ल ठकुरीको ब्वाइफ्रेन्ड भन्ने एक युबा मिडियामा आयका छन् | उनले आफु सुस्मको दाजु भयको पनि दाबी गरेका छन् | उनले सुस्मको फेसबुक चलाउने गरेको तर कसै संग लब भयको जानकारी नभयको बतायका छन् | त्यस्तै:बयान: फेसबुकबाट पहिला लभ पर्या हो त्यस्को लागि सरी । त्यहाबाट मलाइ केटा मन परेन तिमी तिम्रो बाटो लाग म मेरो बाटो लाग्छु भनेको तर पनि मानेन । एकचोटी आको थियो हामीले पुलिसलाई बुझायौ ।पटक पटक मलाइ धम्की दिन्थ्यो त्यो दिन आउदा मैले डरले ममिलाइ भनिदिए त्यहाबाट के भयो मलाइ थाहा छैन। प्रेम सुनारले फोनमार्फत सुस्मा सङ्ग गरेको कुराकानीको ]बाँकी भिडियोमा हेर्नुहोस् https://youtu.be/HJohJwxy7UI
महिलाभित्र देखा पर्ने दमित प्रेम र यौ न लाई अक्षरमा उतार्ने लेखिका हुन् । अभिलासा २०६३ कविता संग्रह, अभिषेक २०६६ उपन्यास तथा तिम्रो लोग्ने र म २०७१ गरी ३ वटा पुस्तक बजारमा ल्याइसकेकी निरुपा पुराना कवि चितवन शिखरवासकी छोरी हुन् । कथा संग्रह ‘तिम्रो लोग्ने र म’ बजारमा आएपछि उनी आलोचितसमेत भएकी थिइन् । प्रसिद्ध कथाकार मनु ब्राजाकीको कथा संग्रह ‘तिम्री स्वास्नी र म’ कै शैलीमा लेखिएको ‘तिम्रो लोग्ने र म’ र उनको लेखनका विषयमा निरुपासँग साप्ताहिकको कुराकानी मनु ब्राजाकीकै शैलीमा ‘तिम्रो लोग्ने र म’ लेख्नुपर्ने कुनै कारण थियो त्यो कथा मैले आफू किशोरी हुँदा पहिलो पटक पढेकी थिएँ । कथाको पात्र अर्काकी श्रीमतीसँग हाकाहाकी बे’डसम्म पुगेको कुरा पढ्दा मेरा कान रातापीरा भएका थिए । लोग्नेमानिस कति सजिलै यस्ता कुरा लेख्न सक्छन्, स्वास्नीमानिसले यस्तो लेख्न सक्लान् ? कसले लेख्ला यस्तो कुरा भन्ने लागेको